Taariikh Nololeedka Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed | http://kismaayodaily.com
Agaasimaha Madaxtooyada Kamaal Gutale ayaa aqriyay wareegtada uu Madaxweynaha ku magacaabay Ra’iisul wasaare C/wali Sheekh Axmed Maxamed.
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed ayaa hadal uu jeediyay markii la magacaabay waxaa uu sheegay inuu xooga saarayo barnaamijka hiigsiga cusub ee New Deal.
Dr. C/wali Sheekh Axmed ayaa la soo shaqeeyay Bankiga Islaamka ee fadhigiisa yahay dalka Boqortooyada Sacuudiga, waxaa uu bartay kulyada dhaqaalaha waa Soomaali Canadian.
Jowhar.com ayaa heshay nuqul ka mid ah taariikh nololeedka C/wali oo noqday ninka ugu macquulsan musharaxiintii soo gudbiyada codsiyada iyo CV lagu dalbanayay xilka Ra’iisul Wasaaraha.
Hadaba halkan ka aqriso Taariikh nololeedka C/wali Sheekh Axmed
Kismaayodaily On December - 12 - 2013
Somali Diaspora in North America, somali prime minister